Nhau dzeBhaibheri: VaGibheoni Vakachenjera - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Mazhinji amaguta muKanani zvino anogadzirira kurwisana naIsraeri. Anofunga kuti angakunda. Asi vanhu vomuguta riri pedyopo reGibheoni havafungi kudaro. Vanodavira kuti Mwari ari kubetsera vaIsraeri, uye havadi kurwisana naMwari. Zvino unoziva here chinoita vaGibheoni?
Vanosarudza kuita kuti kuoneke sokunge kuti ivo vanogara kumwe kure kure. Zvino vamwe vavarume vanopfeka mamvemve neshangu dzakabvaruka. Vanokwidza masaka akabvaruka pambongoro dzavo, uye vanotora chingwa chekare chakaoma. Ipapo vanoenda kuna Joshua ndokuti: ‘Tabva kunyika iri kure kwazvo, nokuti takanzwa nezvaMwari wenyu mukuru, Jehovha. Takanzwa zvinhu zvose zvaakakuitirai muEgipita. Saka vatungamiriri vedu vakatiudza kugadzirira mbuva ndokuenda kundoti kwamuri: “Tiri vabatiri venyu. Pikirai kuti hamuzorwisani nesu.” Mungaona kuti zvipfeko zvedu zvabvaruka norwendo rurefu uye kuti chingwa chedu chava chekare uye chaoma.’
Joshua navamwe vatungamiriri vanodavira vaGibheoni. Vanopikira kusarwisana navo. Asi mazuva matatu pashure vanonzwa kuti vaGibheoni vanogara pedyopo zvomenemene.
‘Makatizivisireiko kuti makabva kunyika iri kure?’ Joshua anovabvunza.
VaGibheoni vanoti: ‘Takadaro nokuti takaudzwa kuti Mwari wenyu Jehovha akanga apikira kukupai nyika ino yose yeKanani. Saka taitya kuti mungatiuraya.’ Asi vaIsraeri vakachengeta chipikirwa chavo, havana kuuraya vaGibheoni. Asi vakavaita vabatiri vavo.
Mambo weJerusarema anotsamwa nokuti vaGibheoni vaita rugare naIsraeri. Saka kunamamwe madzimambo mana anoti: ‘Uyai mundibetsere kurwisa Gibheoni.’ Madzimambo mashanu aya anoita kudaro. VaGibheoni vakachenjera here kuita rugare naIsraeri, uko zvino kunosakisa madzimambo aya kuuya kuzorwisana navo. Tichaona.
Vanhu veGibheoni vakasiyana sei nevaKanani vari mumaguta ari pedyo?
Sezviri pamufananidzo, vaGibheoni vanoitei, uye nei?
Joshua nevatungamiriri vevaIsraeri vakavimbisei vaGibheoni, asi vanozozivei mazuva matatu gare gare?
Chii chinoitika apo madzimambo omune mamwe maguta anonzwa kuti vaGibheoni vaita rugare nevaIsraeri?
Verenga Joshua 9:1-27.
Sezvo Jehovha akanga arayira rudzi rwaIsraeri kuti ‘ruparadze vose vagere panyika,’ kusaparadza kwake vaGibheoni kunoratidzei? (Josh. 9:22, 24; Mat. 9:13; Mab. 10:34, 35; 2 Pet 3:9)
Nokuchengeta sungano yaakaita nevaGibheoni, Joshua akasiyira sei vaKristu vomuzuva ranhasi muenzaniso? (Josh. 9:18, 19; Mat. 5:37; VaEf. 4:25)
Verenga Joshua 10:1-5.
Nhasi boka guru revanhu rinotevedzera sei vaGibheoni, zvichiita kuti rirwiswe nokuda kwei? (Josh. 10:4; Zek. 8:23; Mat. 25:35-40; Zvak. 12:17)